Zvinhu zvakakosha kana nzvimbo dzekushandisa zvinoda kugadziriswa kwakakosha.
Iyo flux inoshandiswa panguva yakajairika induction brazing maitiro inowanzo kuve iyo kukonzera kukora uye kupisa pane yekushandira. Flux inclusions inogona zvakare kutungamira mukukanganisa kwezvinhu zvemidziyo. Kupfuurirazve, nekuda kweiyo okisijeni iripo mumhepo kupinduka kweiyo workpiece inoitika.
Aya matambudziko anogona kudzivirirwa kana uchisunga pasi peinert gasi kana vacuum. Iyo inert gasi nzira inogona kunyatso sanganiswa pamwe neye inductive kudziyisa sezvo pasina yakavhurika murazvo panguva ye induction brazing pasi pekuchengetedza gasi uye kuyerera-inoenderana-inoenderana mamiriro anogona kuve ari nani kudzorwa.
Categories Technologies Tags brazing, yakakwira frequency inert gasi brazing, induction inert gasi kusungira, induction inert gasi hita, induction inert gasi kudziyisa, induction inert gasi inonyungudika, induction inert gasi kusungira, gasi inert, inert gasi kusungira, inert gasi brazing maitiro, inert gasi kudziyisa, inert gasi induction hita, inert gasi induction kupisa, inert gasi soldering Post navigation